Amagagasi okushisa abulalayo azoba njalo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu kubonakala kakhulu, kuyanda kakhulu futhi kuyalimaza, imiphumela yayo iba mibi ngokwengeziwe, noma kunjalo, imizamo yokuyinciphisa ayenziwanga, noma okungenani ayanele njengoba kufanele.
Njengoba sazi kwezinye izikhathi, Ukuguquguquka kwesimo sezulu kwandisa imvamisa namandla egagasi lokushisa nesomiso, Kodwa-ke, kwabezindaba asilizwa igama elithi "ukuguquka kwesimo sezulu" noma "ukufudumala kwembulunga yonke", kepha sikhuluma kuphela ngokushisa okuthe xaxa okungatheni nokuhlala isikhathi eside. Kuzokwenzekani uma lokhu kuqhubeka?
1 Amagagasi okushisa ayanda
2 Ukufa kwabantu kanye namazinga okushisa aphezulu
Amagagasi okushisa ayanda
Ukufudumala kwembulunga yonke kanye nokuguquka kwesimo sezulu kwenzeka ikakhulu ngenxa yokwanda kokukhishwa kwegesi ekhipha ukushisa okukhishwa ngabantu kusukela ekuguqulweni kwezimboni. Kulinganiselwa ukuthi amaphesenti angama-74 omphakathi womhlaba azodalulwa amaza okushisa abulalayo ngonyaka wama-2100. Lokhu kulinganiselwa ngamapharamitha lapho ukukhishwa kwegesi kuqhubeka nokwanda ngezinga elifanayo njengoba kwenza manje. Lokhu kushicilelwe ephephabhukwini laseBrithani i-Nature.
Ucwaningo, olwenziwe yiYunivesithi yaseHawaii (USA), lubikezela ukuthi, noma ngabe lokhu kukhishwa kwehliswe kakhulu, cishe abantu abangama-48% bazothinteka ngokunyuka okungazelelwe kokushisa. Ngale ndlela, siqeda izinketho zethu zekusasa. Kulezi zinsuku, amagagasi okushisa ayingozi kakhulu engxenyeni enkulu yabantu (ikakhulukazi asebekhulile). Kungakho, uma siqhubeka kanjena, amathuba okuthi sizokwazi ukumelana namandla okushisa ayoncipha.
Amagagasi okushisa abangela izinkulungwane zokufa emhlabeni wonke unyaka nonyaka. Inkinga enkulu ehlotshaniswa namagagasi okushisa yisomiso. Ukufudumala esinakho namahora amaningi okukhanya kwelanga, amanzi ayahwamuka kakhulu kanye nemithombo yamanzi engaphansi esinayo. Ngakho-ke umthelela wamaza okushisa mkhulu kakhulu uma kunesomiso.
Uma ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa kuqhubeka ngaleli zinga, amazinga okushisa aphakathi komhlaba azoqhubeka nokukhuphuka kakhulu futhi ngeke sibe khona iSivumelwano SaseParis esingasinqanda.
“Umzimba womuntu usebenza kuphela ebangeni elincanyana lokushisa komzimba cishe ngama-37 degrees Celsius. Amagagasi okushisa abeka engcupheni enkulu empilweni yomuntu ngoba amazinga okushisa aphezulu, akhuliswe umswakama omkhulu, angakhuphula izinga lokushisa komzimba futhi adale izimo lokho kubeka impilo engozini”, U-Adds Mora, ongomunye wochwepheshe abaphethe ucwaningo.
Njengoba izinga lokushisa elilungile lingama-37 degrees, imetabolism yethu ayikwazi ukuqeda ukushisa okwenziwa lapho izinga lokushisa eliphakeme lingaphezu kwama-37 degrees. Ngakho-ke, ukushisa okuphezulu okunjalo kuyingozi empilweni, ngoba ukwanda kokushisa kungenzeka ngaphakathi komzimba okudala ukulimala.
Ukufa kwabantu kanye namazinga okushisa aphezulu
Lolu cwaningo lwenze uphenyo ngakho konke ukufa okudale iziqubu zamaza okushisa kusukela ngo-1980. Angaphezulu kuka-1.900 XNUMX amacala akhonjwe ezingxenyeni ezahlukene zomhlaba lapho amazinga okushisa aphakeme abangele ukufa kwabantu. Kube namagagasi okushisa abulalayo angama-783 futhi bathole umkhawulo wamazinga okushisa nomswakama lapho, lapho, imiphumela empilweni ebulalayo. Indawo yeplanethi lapho izimo zezulu zizodlula lowo mkhawulo wezinsuku ezingama-20 noma ngaphezulu ngonyaka inyukile eminyakeni yamuva, futhi ososayensi bakholelwa ukuthi izoqhubeka nokukhula ngisho nalapho kuncishiswa ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa.
Izibonelo ezihlinzekwe ngochwepheshe zifaka ukushisa okuhlasele iYurophu ngo-2003 nokwadala ukufa kwabantu ababalelwa ku-70.000, leso esathinta iMoscow (Russia) ngo-2010 sabulala abantu abayi-10.000 1995 noma esaseChicago ngo-700 , efinyelele kwabangu-XNUMX. Okwamanje, Cishe ama-30% wabantu bomhlaba bavezwa yilezi zimo ezibulalayo unyaka nonyaka.
Yilokhu okwenza ukuguquguquka kwesimo sezulu futhi isikhathi ngasinye imizamo yokukunciphisa iba mincane.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Amagagasi okushisa » Amagagasi okushisa abulalayo azoba njalo